QM oo qorsheyneysa inay Somalia ka qabato doorasho ay Somaliland qeyb ka tahay | Xaysimo
Home War QM oo qorsheyneysa inay Somalia ka qabato doorasho ay Somaliland qeyb ka...
QM oo qorsheyneysa inay Somalia ka qabato doorasho ay Somaliland qeyb ka tahay
Xukuumada Somaliland ayaa shaacisay in wakiilka Xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay ee Soomaaliya James Swan uu ka shaqeynayo nidaamka doorashooyinka Soomaaliya, oo ay ku jirto Somaliland.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa soo saaray war-murtiyeed uu kaga jawaab celiyey, kuna cambaareeyey qorshahaas iyo hadallo ka soo yeedhay Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
“Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay iftiiminaysaa sida qotada dheer ee ay uga xun tahay warmurtiyeedkii uu dhawaan soo saaray Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr. James Swan oo sheegay in xafiiskiisu uu ka shaqeynayo qorshaha geddi-socodka nidaamka doorashooyinka Soomaaliya oo Somaliland-na ku jirto. Hadalkaasi maaha mid saamanaya xaqiiqada ka jirta Jamhuuriyadda Somaliland madax-bannaanideeda siyaasadeed iyo nidaamkeeda dimuqraadiyadaba,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Qoraalka wasiir Koore ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhawaaqa ka soo yeedhay Wakiilka Xoghayaha Guud “uu ka hor imanayaa Qaramada Midoobay oo sheegta inay daacad ka tahay siyaasadda mandaqadda.”
Somaliland ayaa sheegtay in war-saxaafadeedkii James Swan ay u aragto “daandaansi iyo farogelin uu ku sameeyey xornimada Somailand iyo is-xukunkeeda.”
“Hadalka Wakiilka Xoghayaha guud wuxuu xushmad darro ku yahay waajibaadkii ay aheyd inay Qaramada Midoobay ay garab istaagto nabadgelyada iyo xasiloonida mandaqada,” ayuu wasiir Koore ku yiri qoraalkiisa.
Koore ayaa sidoo kale sheegay in tallaabada James Swan “ay waxyeeli doonto himiladii laga qabay dib u bilaabista wadahadalada beesha caalamku doonaysay inay u qabato Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya.”